Umxholo woNcwadi oluBanzi lweBaccalaureate uyasuswa | Uncwadi lwangoku
Ngaphandle kokuya kwezopolitiko, siza kuyishiya le nto ku blogs y iiwebhu Ezopolitiko njengezona zinto zingumxholo wazo, siza kukunika iindaba, iindaba ezibuhlungu, zokuba urhulumente okhoyo ebephethe ukunika Isikere kwakhona kwinto ekubhekiswa kuyo yinkcubeko, Ukuphelisa umbandela Uncwadi lweNdalo iphela weBaccalaureate. Njani? Siza kukucacisela apha ngezantsi. Ngoba? Ayaziwa okanye ayiqondwa.
Ngaba uyayazi ukuba uziva xa unezinto ezininzi onokuzithetha kodwa umsindo uyakuthintela eku-odeni amagama ngokuchanekileyo? Kulungile oko kwenzeka kum ngoku! Ukuthi ndicaphukile akwanele, kodwa ke, ayisiyonto ngaphandle koluvo oluvela komnye umbhali ozinikele ekubhaleni amanqaku kuncwadi. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ayindim ndedwa, ocinga loo nto inkcubeko akufuneki ichukunyiswe, okanye ubuncinci, hayi kancinci ...
Sele yenzekile ngexesha ngezifundo ze umculo o intanda-bulumko... Ngokweninzi, zizifundo ezinokuhanjiswa, esinokuthi sidlule kuzo, kwaye ukuba asizichukumisi, akukho nto yenzekayo, akunjalo? Ewe akunjalo! Ewe kuyenzeka ... Kuye kwafakazelwa ngokwesayensi ukuba umculo uphucula isigama, usinceda sigxile emsebenzini, siphucula ukukhula kwengqondo yethu kwaye sinceda nokuphucula ukujikeleza, phakathi kwezinye izibonelelo, kunjalo ...
Kwaye ifilosofi, kutheni uyinika? Kodwa, ukuba isinceda kuphela ukucinga ngcono…! Ngokuqinisekileyo, abo kuthi inkcubeko ayichukunyiswa, siye sageza ...
Kwaye ngoku bahlasela i Uncwadi lwehlabathi. Kuyinyani ukuba uncwadi lunokuthanda ngakumbi okanye ngaphantsi, kodwa ngaba kunyanzelekile ukuba sichaze nganye nganye ngezibonelelo zokufunda? Ngaba kunyanzelekile ukuba sichaze ukuba kutheni kufuneka sifunde uOscar Wilde, uDante Aligheri, uCortázar, uBenedetti, uAuster, uBeccquer, uOwell…? Ngaba kunyanzelekile ukuba sichaze ukuba kutheni le nto kufuneka sikhuthaze ukuthanda ukufunda kunye noncwadi ngokubanzi kulutsha? Andenzi tyala!
Kubonakala ngathi silibale ukuba ukuba nezifundo ezininzi okanye ezingaphantsi akuthethi ukuba nenkcubeko engaphezulu okanye encinci ... Ukusuka ezikolweni nakwiziko, abantwana abanezifundo bayaphuma, kodwa ngaba babashiya ngenene abantwana benenkcubeko? Sele utsho Unamuno: "Owona mdla mkhulu kufuneka ube kukunyusa inqanaba lenkcubeko ngokubanzi kunye nokuvusa inkanuko yezinto ezinesidima kunye nokucokisa umoya".
Oko kwathiwa, kuhlala kubulela urhulumente waseSpain, ngokungafuni ukuvusa incasa yoncwadi kwindalo iphela ... DEP.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Umxholo woNcwadi oluBanzi lweBaccalaureate uyasuswa
Impazamo enkulu: ukufunda ezingqondweni ezincinci kunceda ukudibanisa inkqubo ye-synaptic kwaye kuyilungiselela iimeko ezinzima ngakumbi; ukukhetha izihloko ezifanelekileyo ezijolise kwisizukulwana esitsha zifundisa kwaye zibonwabise ngaxeshanye.
Ukuqukumbela, ilahleko enkulu kwilifa lemveli (kwixa elizayo) loluntu lwaseSpain.
Ebesele ezazi iindaba. Unyanisile, kodwa ... yintoni enokulindelwa kwiNkulumbuso, njengoko uPérez-Reverte esitsho, engazange yabonwa kumsitho wenkcubeko?
Ngaba ukhona umntu osenolwazi lokucinga ukuba amandla anomdla wokuba nabemi abafundileyo abakwaziyo ukuzicingela, oko kukuthi, ngeendlela zabo? Sele siyazi ukuba ukutyhubela imbali bekusenziwa okuchaseneyo: ukwanelisa uninzi kwaye kubaphazamise ukuze bangadali ngxaki. Abalawuli baseRoma, kunye "nesonka kunye neeseksi" zabo ezidumileyo, bayenze kakuhle kakhulu. Namhlanje singalitshintsha elo binzana lithi "ibhola kunye neTele 5"
Kubonakala ngathi okwangoku kuphela litekhnoloji kunye nemicimbi yemali, okt izinto eziphathekayo. Njengokuba umphefumlo wawungadingi ukuzondla ngomculo, ukupeyinta, iincwadi, njl. Okulusizi kukuba, zininzi iigusha othi xa uzichazile zonke ezi zinto, bakubize njengesixhobo okanye bazokujonga ngendlela engaqhelekanga okanye bahleke ebusweni bakho bedelela amazwi akho kunye neengxoxo.
Bendingayazi ibinzana lika-Unamuno, kodwa ndiyavumelana naye.
Kwelinye icala, kukho abafundi baseyunivesithi (ndinoluvo lokuba bambalwa, andazi), nangona unesidanga, isidanga senkosi kunye nezinye izinto, abangakufundeli incwadi enye unyaka wonke.
Ngaba uyakholelwa ukuba kule veki ndifunde elona phephandaba libaluleke kakhulu e-Asturias ukuba bafuna abafundi bapase i-ESO ngenqanaba eliqhelekileyo elingaphantsi kwe-5 kunye nokusilela kabini (ukuba nje ayingqinelani ukuba ziLwimi noNcwadi neMathematics )? Kubonakala ngathi yimpazamo enkulu kum.
Nangona kunjalo, yile ndlela ihamba ngayo njengoluntu. Ngokwandayo "ukungafundi" kubuchwephesha kwibhari.
I-hug evela e-Oviedo kunye nempelaveki emyoli.
Molo Alberto, ndiyavuma ngamazwi kunye neemvakalelo zakho. Imibuliso kumhlaba oluhlaza we-Asturian.
Enkosi. Ngendlela, uvela phi?
UJose Marcelino sitsho
Imodeli yangoku yemfundo inezixhobo, ezingabalulekanga, ezingagxekiyo kunye nombono okhethekileyo wabemi bedolophu, yimodeli esemgangathweni yabaphetheyo kwezorhwebo kunye nokwenza ingeniso kunye nokuxhaphaza kunye nokuzinikezela kwiingcinga zorhwebo lwangaphandle kuqoqosho lwaseMexico .. Uzwilakhe wentengiso kunye neo-liberalism ngokugqwesa
Phendula ujose marcelino
I-ballbe garcia sitsho
Ngenani lababhali bendalo iphela ukuba bafunde. Kodwa inkcubeko ayikho kwifashoni
Phendula Tere Ballbe Garcia
Ewe ... mhlawumbi eyona nto ifanelekileyo iya kuba kukuthetha ngezopolitiko kunye nezopolitiko. Uhlaziyo kwezemfundo lwenziwa ngabezopolitiko. Ubeka ukugxininisa kuMculo, kuNcwadi kunye neFilosofi, kodwa ayitsho ngaphandle kokuba inefuthe elibi kwiPlastikhi okanye kwiTekhnoloji. Andifuni nokukhumbula ukuba inkolo inexabiso kwezemfundo kwaye iqala ukukhuphisana ngokuthe ngqo neTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano.
nenekazi elche sitsho
Ndifuna ukufunda! Ndikwi-EGB
Yintoni endiyifumanayo xa ndikhangela imibhalo yakudala etshintshe uncwadi jikelele x uncwadi lwezoqoqosho olunomdla kwimali. Abandithengi, bathathe, banyuse i-Celtic, i-Iberia, njl.
Phendula konakalisa de elche
Ewe Ewe sitsho
Ngaba uncwadi lwendalo iphela alunakulunga? Mhlawumbi ikhemistri enebuxoki obuvela kwitheyibhile yamaxesha. Bendingafuni ukuphazamisa xa kusenziwa into nganye kodwa ndibulela uncwadi kwindalo iphela ndikwazile ukufumanisa ukuba ikhalsiyam sele ikule nto.
Yintoni i-chemistry ngaphandle koncwadi lwendalo iphela? Xa kwakusenziwa ikhalsiyam? Iinkampani ezixuba amayeza zifuna amayeza?
soze utsho sitsho
Igama leekhemikhali zeGypsum?
enye kwakhona sitsho
Umphathiswa wenkcubeko = ukungazi? Lowo wazi kancinane kunam.Andazi nokuba ndibhale kanjani
aldonza lorenzo sitsho
Kubuhlungu, kodwa ilizwe njengoko lihamba, lifuna amadoda nabafazi njengemihlambi.
Ukufunda uncwadi olulungileyo kunye nababhali kwenza abantu babe novakalelo ngakumbi, ngokomoya, simahla kunye nenkcubeko.
Kwaye ayilunganga le mibutho mitsha, apho abanye balinde ukuba babenakho ukubalawula.
ISpain, njengamanye amazwe amaninzi, iyancipha.Kwaye nokuba ikhona, apho iileta ziye zakhanya, ukuba amandla anqunyulwe ...
Phendula ku-aldonza lorenzo
Molo Lorenzo! Umculo usaphila? Ewe, siza kubafundisa ngobugcisa basimahla.Masitshabalalise le ngqwabalala ifunde inzululwazi ngezopolitiko kwaye siyifundise ukuba yintoni ezopolitiko ngobugcisa.
Lungisa isicatshulwa sam ngenxa yokuswela kwam ulwazi.Okuqala: siza kubuza umphathiswa wezemfundo nenkcubeko ukuba yintoni ubugcisa obenzelwe yena.Okwesibini: yintoni ipolitiki.Okwesithathu ukuba ipolitiki bubugcisa bamandulo xk musa ukubusebenzisa. yintoni ayaziyo enye malunga noncwadi lwesihlanu kwindalo yonke: Wayeqonda ukuba ubuzwe isithandathu xk akwenzi
UCarmen Riobó Fernandez sitsho
Ngaphandle kokuya kuvavanyo lwe-LOMCE, endingayithandiyo kwaphela, njengoko ndingakhange ndiyithande iLogs, i-LOES kunye nabanye, uguquko olulandelayo luye lwaphelisa ubuntu lwaza lwanciphisa inzululwazi iminyaka emininzi. Kodwa oku akuyonyani, uncwadi oluvela kwindalo iphela ukusuka ku-2 ukuya ku-1, luyaqhubeka neeyure ezine kwaye, kumava am, ukusukela kwiminyaka yokuphuhlisa iishedyuli, ngoku kulula kakhulu ukufundisa kumaziko amancinci, ngaphambi kokuba kungenzeki kwaphela.
IsiLatin besilayishwe iminyaka emininzi, kungaphantsi konyaka onyanzelekileyo, oku kubangelwe yiPSOE kaFelipe González, noMphathiswa uMaravall entloko, isiGrike ukusukela ngoko phantse akunakwenzeka ukuba sifunde, urhulumente kaZapatero, ewe andenzi njalo. khumbula kakubi, uncwadi lwaseSpain lwalayishwa, phambi kwesihloko, namhlanje isihlomelo kumxholo wolwimi lwaseSpain kwaye ngoku urhulumente we-PP, kunye neLomce, uye wafaka ifilosofi.
Esi sisishwankathelo esifutshane, umonakalo mkhulu kakhulu, kodwa, hayi, uncwadi oluqhubekayo luyaqhubeka, ngethamsanqa, ngeeyure ezifanayo kwaye, kunjalo, eGalicia, kunye namathuba amaninzi okukhethwa. Akunyanzelekanga ukuba uxoke ukubonisa uhlaselo abantu abaye babandezeleka iminyaka embalwa.
Phendula Carmen Riobó Fernández
Iziprofeto ezenziwe nguJules Verne kwinoveli yakhe ethi "Paris ngenkulungwane yama-XNUMX" ziyazaliseka, kunjalo kule meko yi "Madrid ngenkulungwane yama-XNUMX", into ebuhlungu.
ULuis Ramon sitsho
Kuphela nje ukuba andifumani magama ... Ndifile.
Phendula uLuis Ramón
ialoma maioi sitsho
Ngaba umntu unokuchaza ukuba luyintoni uncwadi lwehlabathi? Andithethi ngokuba ngubani ofuna ukuyisusa? Hahaha
Phendula u-alloma maioi
Ukuba umntu ogula ngengqondo uthatha uncwadi lwehlabathi, ndiyakucela ukuba i-geology kunye nebhotani zibenoncwadi lwakudala ngakumbi kwaye ... * ibhotani kwaye ishiye ubugcisa endaweni yayo. Ibhayoloji bubugcisa?
isicatshulwa sangaphambili? sitsho
Ngaba singathetha ngezopolitiko kwinethiwekhi?
Phendula kwisicatshulwa sangaphambili?
Ndiza kuthetha ngenani lezihlalo ezenza izigqibo eSpain. Kuqala, ndizakungena ekuswelekeni kwazo zonke iingxoxo zepalamente kumjelo kamabonakude, nokuba banomdla wabemi okanye hayi.Ndingacaphula ukuphindwaphindwa kwezihlalo ezathi ewe kule projekthi inkulu njengokunyusa iminyaka yokusebenza ukuba ibe ngama-67. ususa ubugcisa obubonwayo? Sele bezithathile? Enkosi Mphathiswa ngokucacisa okungaka ebantwini.Ndingathanda ukwazi amagama ekhontrakthi elolu hlobo, ukwazi ukuba ngubani otyikityo kwaye nini, ngakumbi kuba ndiyityikitya kwaye ndiyaphumelela ngokutshintsha okanye izibonelelo zelinye iqela lokusayina.
into endiyithethileyo sitsho
Ngaba siza kubona amagcisa? Siza kuba nakho ukuziva, sicinge kwaye sizibandakanye namanye amanqanaba ehlabathi.Ngaba oku okanye oku kubaluleke ngakumbi, ngubani othatha isigqibo sokuba inzala ibaluleke kakhulu okanye yeyiphi umdla? embi okanye imali, ukhetha ntoni? Kubuhlungu x imali okanye imali x ubugcisa bobugqi? Kulungile x iilogo zam zobomi ndingathi i-x factor ngumdla wakho hayi wonke umntu
Ngokuqinisekileyo aba bantu bathatha isigqibo emva koko bathenge umzobo kwaye baxelele izihlobo zabo, awuyazi ukuba yimalini ebiza yona
Ngaba kukho umntu okhathazekileyo ngokufunda uMmiselo weSikolo samaBanga aPhakamileyo se-LOMCE? Uncwadi lweNdalo iphela aluzange lunyamalale, ludlulele kwi-1º yeBaccalaureate kangangeminyaka emibini. Iphelelwe kukukhetha, ewe (ibinganyanzelekanga). Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa baninzi abafundi ababhalise kwibanga le-1 kunaleyo yayinikezelwa kwi-2nd grade-ngenxa yokuyeka isikolo, ukusilela kunye nezinye izizathu-. Kwaye masingakulibali ukuba ayikho kuwo onke amaziko, ngokuchaseneyo. Yinto enye ukuba inikwe, kwaye enye kukuba abafundi bayikhethe.
.l. ukwenzela bona sitsho
Enkosi Emma! Kuba bendizokuxelela ukuba yintoni ubugcisa obukum. Kum ubugcisa bumuncu kumphathiswa wezemfundo ukuba abe nabantwana abangama-30 eklasini nootitshala abaninzi abangaphangeliyo. kuwo wonke umntu. Ewe, ngenxa yobugcisa endinabo, ndingathanda ukukubuza enkundleni ukuba ucinga ntoni ukuba ndinokuba imali yakho oyigcinileyo emva koko ndihleke ebusweni bakho.
Phendula ku .l. ukwenzela bona
UAlberto G. sitsho
Njengomfundi ndingathanda ukugqabaza kwimiba eyahlukeneyo endiyibona igqwethekile kuyo yonke le nto.
Ngaba yinkcubeko ngokwenene ukuba inyanzelwe ngendlela enje? Makhe ndichaze: Ngaba ucinga ukuba ukufunda uncwadi kwiinyanga ezili-9 kuya kuvelisa naluphi na utshintsho olubalulekileyo? Mna ngokwam ndiyakuthanda ukufunda, ndiyathanda ukuzicelomngeni, kodwa andikuthandi "ukunyanzelwa ukuba ndifunde." Ngenxa yokuba ndilahlekelwa ngumlingo, kwaye ndilahlekelwe yintando.
Ucinga ukuba yintoni umxholo woncwadi? Ukushiya bucala "ipolitiki", unayo into entsha ongayongeza? Kuba ukuba akunjalo, sele ndiyivile yonke. Batshabalalisa inkcubeko, baxhaphaza ulutsha ... Masibeke ecaleni ucalucalulo lwezopolitiko okomzuzwana, yile nto iluncedo kakhulu kuncwadi, ukuvula amehlo ethu, simke sizuze umbono.
Sikwisikolo samabanga aphakamileyo, kwaye masijongane nayo, imisebenzi, kunye noluntu, ziba zikhethekileyo. Asinazo zonke iziphiwo ngokwaneleyo ukuba sigxile kwikamva lethu kwaye sinexesha lokufumana ulwazi ngokubanzi. Ndingathanda ukucinga ukuba kamva ndiza kuba nexesha lokufunda ngokukhululeka, ukubaleka kuyo yonke into endikhathazayo. Kodwa ndiyoyika ukuba akunjalo. Ngubani apha ongenangxaki yexesha? Ewe, khumbula okomzuzwana iminyaka yakho yokufunda. Ukuxhalaba, akunjalo?
Ngamafutshane, ndiyakuxhasa UKUPHELISWA KWENANI LONKE loNcwadi kwisikolo samabanga aphakamileyo, kuba enyanisweni, aluzange lususwe, luye lwasiwa kwindawo yokuqala, ngaphandle kokunyaniseka ekukhetheni. Ulutsha oluninzi luyeka ukufunda ngokuchanekileyo ngenxa yoxinzelelo oluveliswa sesi sifundo kubo. Abantu abaninzi abanjengam bayasilela ukuthanda uncwadi ... inyani iyasigqitha, kwaye asizukuvumela ukuba uvakalise uluvo lwakho ngale ndlela ithobekileyo kunye neyoyikisayo ngengqokelela yexesha elizayo ngesizathu sokukhulisa into esingabophekanga ukuyazi.
Onke amasiko ethu, kwaye inkcubeko iguquka nathi. Ukuba abantu abasafundi kakhulu kunangaphambili, kungenxa yokuba inyani ayincami. Kwaye kufanele ukuba sazi ngoku, kukungabikho kwengxoxo eyenza amagcisa. Umzekelo, iGolden Age.
Phendula u-Alberto G.
Izifundo ezingenzi nto x eluntwini kufuneka zisuswe? Ngaba unokubeka izimvo ukuba zingaphi amagama abo?
UYesu Hernandez Hernandez sitsho
Ngaphandle "kokufuna ukungena kwezopolitiko" INYANISO YOKUBA UNGENA kwaye uyayazi ... Into ayithethayo bubuxoki, isifundo seNcwadi yoLuntu asipheliswa, kodwa akusekho kukhetha kunyaka we-2 we-Baccalaureate kwaye uqhubeke 1.
Phendula Jesús Hernandez Hernandez
Kulo nyaka ndiqale kwisikolo samabanga aphakamileyo kwaye bendihamba nayo yonke inkohliso, ukubhaliswa ngesandla, ndikhethe isifundo soNcwadi lweHlabathi. Ukufika kwam kuyacaca ukuba bayandinyanzela ukuba ndithathe iMbali yeHlabathi yeHlabathi, kuba kwelo ziko akukho nanye. Andiqondi ukuba kutheni abanye bevunyelwe kwaye abanye bengavunyelwanga ... Le nkqubo indenza ndiphambane
Iincwadi ezi-3 endinokuzinika zona ngoSuku lweeNcwadi